Kobo Aura One သည် ၀ ယ်လိုအားအလွန်မြင့်မားသည် eReaders အားလုံး
Manuel Ramirez | | Kobo, NOTICIAS
Kobo သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကက startup များသည်အပြင်ပန်းကိုကြည့်ဖို့လိုကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် ဒေသဆိုင်ရာလမ်းအတွက်မနေပါနဲ့ ဤအကြီးထွားဖြစ်နိုင်ခြေနီးစပ်သောစျေးကွက်များတွင်။ Kobo ကိုယ်တိုင်ကအလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များစွာဖြင့်အရာရာကိုမည်သို့ကောင်းမွန်စွာမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိရှိကြောင်းပြသခဲ့ပြီး၎င်းသည်မှန်ကန်သောသော့ကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့သည် အရောင်းရဆုံးပါ.
Kobo Aura One ကတော့သူတို့ထဲကတစ်ခုပါ။ အဲ့တာကရက်သတ္တပတ်များစွာကြာတယ်ဆိုတာငါတို့သိကတည်းကပါ ကုန်ပစ္စည်းမရှိသေးသောကြောင့်ရောင်းမရပါ ဒီကုမ္ပဏီပိုပြီးယူနစ်ထုတ်လုပ်နေစဉ်။ Kobo Aura One eReader ကိုလွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၇.၈ လက်မမျက်နှာပြင်ပါသည့်ကိရိယာအတွက်ရိုင်းစိုင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုများရရှိခဲ့သည်။ အခုတော့သုံးစွဲသူများကသူတို့ဝယ်ယူမှုကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြင်သည်။
သား ရက်သတ္တပတ်များ ၎င်းသည်စားသုံးသူများအတွက် Kobo Aura One ကို Kobo American နှင့် Canada ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ၀ ယ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယခုအခါ miosmo သည် Chapters / Indigo စာအုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်၎င်း၏အွန်လိုင်းစတိုးမှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူနိုင်သောဤ eReader ၏စာရင်းတစ်ခုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤပစ္စည်း၏ဝယ်ယူမှုကိုမြောက်အမေရိကပရိသတ်အတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်လာသည်။
ရယ်စရာကောင်းတာက Aura One ဟာရံဖန်ရံခါအွန်လိုင်းပေါ်မှာထွက်ပေါ်လာတာပါ၊ ဒါပေမယ့်ဒီ eReader ဝယ်လိုအားကြောင့်ရောင်းဖို့တစ်နာရီလောက်မကုန်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုကဖြတ်သန်းသွားတယ် left သူတို့အားယူနစ်ပြောင်းရွှေ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစတိုးဆိုင်များအတွက်သူတို့သည်အွန်လိုင်းမှ ၀ ယ်ယူနိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
Kobo Aurao တစ်ခုသည် eReader တစ်ခုဖြစ်သည် 7,8″ Carta E Ink HD touchscreen ၁၈၇၂ x ၁၄၀၄ resolution၊ 1872GB ​​Internal Memory၊ ComfortLight Pro ရှေ့မီး၊ ဖိုင် (၁၄) ဖိုင် (ePub, PDF, Mobi, JPEG နှင့်အခြား) နှင့် 1404b/ g / n Wi-Fi ဆက်သွယ်မှုများရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Kobo » Kobo Aura One သည်ရက်သတ္တပတ်များစွာကုန်ဆုံးလျက်ရှိသည်
Kobo Aura One တွင် Micro SD slot မရှိခြင်းလား။ Media Markt မှာသူတို့ဟာလရဲ့အလယ်လောက်မှာရမယ်လို့ပြောတယ်။
ဘယ်တော့မေးတာလဲ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က၎င်းတို့ကိုယူရို ၂၄၀ မှ ၂၇၅ ကြားကြားရောင်းခဲ့ကြပြီးအလွန်စျေးကြီးပြီးယခုရပ်နားလိုက်သည်။ သူတို့ကတရားဝင်စျေးနှုန်းကလျှော့ချသည်တိုင်အောင်, ငါရှောက်
Andres Hans ဟုသူကပြောသည်
ထိုအခါစျေးနှုန်းမှဖြစ်ပျက်? တရားဝင်ဈေးနှုန်းကိုယူရို ၂၂၉ ဖြင့်ကြေငြာခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင်စပိန်နိုင်ငံရှိ FNAC ရှိတစ်ခုတည်းသောနေရာတွင်ယူရို ၂၉၆.၆၂ ဖြင့်ရောင်းချသည်။ ၎င်းကို PC Components တွင်ယူရို ၂၂၉ ဖြင့်ဆိုင်းငံ့ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ သို့သော်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ၎င်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။
Mediamarkt တွင် ၄ င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်တစ်ရက်သာတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်နေထိုင်သောစတိုးဆိုင်တွင်ယူရို ၂၉၀ ခန့်သာရှိသည်။ သို့သော်နောက်တစ်နေ့တွင် Aura One ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သည့်သဲလွန်စမျှမရှိပါ။
ဒီ ereader မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကို ၀ ယ်ဖို့ဘယ်နေရာမှမရှိဘူး၊ စတိုးဆိုင်များမှာစျေးသက်သက်သာသာနဲ့စျေးဆိုင်တက်ခြင်းတို့အကြားခရစ်စမတ်လက်ဆောင်မပါဘဲကျန်တော့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်နေပါတယ်။
Andres Hans သို့ပြန်သွားပါ
ငါ 229 မှာ Fnac ၌တွေ့ပြီ
ငါစက်တင်ဘာလတွင် fnac ဖြင့်တရားဝင်စျေးနှုန်းဖြင့် ၀ ယ်ခဲ့သည်။ fnac ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်ယခုတွေ့ရသည့်အရာက fnac.es (ရောင်းချသူရှိရာနေရာကိုကြည့်ပါ) မှတဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချသောအခြားစတိုးဆိုင်များ၏စျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ တရားဝင် fnac သည်တူညီသောစျေးနှုန်းအတိုင်းလိုက်နာသည်။ စတော့ရှယ်ယာတိုးမြှင့်ဖို့ kobo အဘို့အစောင့်ဆိုင်းယူနစ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ အံ့သြစရာပဲ၊ ငါဟာဒီအရွယ်အစားအောက်မှာမရှိတော့ဘူး။
ကောင်းပြီ၊ ဘာမှမကျန်တော့ပါ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်စတော့ရှယ်ယာကုန်သွားပြီးနောက်မည်သည့်အချိန်တွင်ထပ်မံရရှိနိုင်တော့မည်ကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါ။ Mediamarkt မသိ၊ Fnac မသိ၊ Kobo စပိန်နှင့် Kobo အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှစ်မျိုးလုံးသည်သင့်အားဖြေကြားရန်မတွန့်ဆုတ်ပါ။
Pocketbook Inkpad2ရှိသူတစ် ဦး သည်ဖန်သားပြင်နှင့်အလင်းကွဲပြားမှုများစွာရှိပါကကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါသလား။